Linn Ko: August 2013
Fester Mudd:Curse of the Gold for Android
Require Android 2.3 and Higher
Posted by Linn Ko at 5:09 PM No comments:
Excaliur for Android
Require Android 2.2 and Higher
Posted by Linn Ko at 4:39 PM No comments:
dragon of Atlantis for Android
Posted by Linn Ko at 4:36 PM No comments:
Dots for Android
Posted by Linn Ko at 4:21 PM No comments:
Myanmar APN (Auto Internet Setting Configure)
GSM/WCDMA / CDMA 800 တို့ရဲ့ အင်တာနက် Setting များကို ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ထည့်သွင်းပေးမယ့် App လေး Myanmar APN ကိုရေးသားပေးလိုက်ပါတယ် ။ ဒီ app လေးကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် ဖုန်းမှာ Root
Posted by Linn Ko at 3:37 PM No comments:
Dr.Slender Episodio for Android
Posted by Linn Ko at 3:48 PM No comments:
Crazy Chase for Android
Posted by Linn Ko at 3:44 PM No comments:
Notes on Life Pro v7.0 for Android
အရမ်းဈေးကြီးတဲ. note apk လေကို…..စက်၇ုပ်ဘော်ဘော် တို.အတွက်လက်ဆောင်မယ်….မယ်နော်…..
Notes on Life Pro v7.0 APK ဟာအရမ်းလှပတဲ.ပုံစံလေးတွေဖြင်….မိမိ တို. သိမ်းထားလိုသောအကြောင်းအရာတွေကို သိမ်းထားလိုရပါသည်။ Notes on Life Pro v7.0 APK
Posted by Linn Ko at 12:16 PM No comments:
How to reset Samsung S3850
Samsung S3850 Reset ချနည်းလေးပါ..
Setting ထဲကနေ Reset ချလို့မရသူတွေအတွက်ပါ...
ဖုန်းခေါ်တဲ့ Keypad မှာ အောက်က Code လေးတွေရိုက်လိုက်ပါ..
Posted by Linn Ko at 11:13 AM No comments:
Sony Xperia Style ROM for Huawei C8812 ( Root+CWM Require)
Credit to Ko Hien Thu(Myanmar Mobile Users Group)
Huawei C8812 သမားများ အတွက် မိမိဖုန်း Original ပါတဲ့ Rom ကို အသုံးပြုရတာ ရိုးနေတဲ့ သူတွေ အတွက် Sony Style Rom လေးဖြစ်ပါတယ် ….အရမ်းလှ ပတာကြောင့်
Posted by Linn Ko at 12:36 PM No comments:
Fluid Football Versus for Android
Posted by Linn Ko at 12:01 PM No comments:
Garden Mania for Android
Posted by Linn Ko at 11:59 AM No comments:
Night Runner for Android
Posted by Linn Ko at 11:54 AM No comments:
Ninja Miner for Android
Posted by Linn Ko at 11:28 AM No comments:
Terrabots First Encounter for Android
Posted by Linn Ko at 11:20 AM No comments:
Posted by Linn Ko at 10:47 AM No comments:
Hacking Money at Asphalt 8 (iOS)
GameLoft က Aug, 22, 2013 က Asphalt 8: Airborne ကို App Store မှာ $0.99 နဲ့ ရောင်းချပေးခဲ့ပါတယ်။ အရင် Version တွေထက် Graphic ပိုကောင်းလာပြီး ကားအသစ်၊ လမ်းအသစ်တွေ ပါဝင်လာပါတယ် တော်တော်လည်း ဆော့လို့ကောင်းပါတယ်။ အခန်းတစ်ခုမှာ
Posted by Linn Ko at 9:51 AM No comments:
Labels: iOS Game
MEC CDMA 800 Mhz Internet Setting Configuration
Setting ထဲကို အရင်သွားပါ... ပြီးရင် Mobile Network ထဲကို ဝင်ပါ... တစ်ချို့ဖုန်းတွေမှာတော့ More ဆိုတယ့် အထဲမှာ ပါတတ်ပါတယ်... ပြီးရင်တော့ Access Point Name ထဲကိုဝင်ပါ... Menu Key နှိပ်ပြီး
New APN ကိုနှိပ်ပါ... ပြီးရင်အောက်က Setting တွေကို ထည့်ပါ....
Posted by Linn Ko at 5:36 PM 1 comment:
Kiba & Kumba Jungle Run for Android
Posted by Linn Ko at 2:04 PM No comments:
Red Riding Hood for Android
Posted by Linn Ko at 1:38 PM No comments:
Tiny Robber Boob for Android
Posted by Linn Ko at 1:33 PM No comments:
Bagan Keyboard Pro V1.6.8 (Free) (Myanmar Keyboard)
(Version Updated: Version 1.6.8)
Bagan Innovation Technology မှ Android Phone နှင့် Tablet များအတွက် မြန်မာလက်ကွက်စနစ်( Zawgyi Font )နှင့် English လက်ကွက်စနစ်ပူးတွဲပါရှိသော Bagan Keyboard (PRO) Version ကို စတင်ထုတ်ဝေလိုက်ပါသည်။ Bagan Keyboard အားအောက်ပါ Link တွင်ရယူနိုင်ပါသည်။
Posted by Linn Ko at 12:48 PM 1 comment:
World Lens Translator v2.1.1 for Android
စပိန် ၊ ပြင်သစ် ၊ အီတလီ စတဲ့နိုင်ငံတွေကို သွားလည်လို့ လမ်းပေါ်က လမ်းဆိုင်းဘုတ်တွေဖတ်တဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ ဘာသာစကားတွေနဲ့ဖြစ်နေလို့ နားမလည်ဘူးမဖြစ်ရအောင် World Lens Translator လို့ခေါ်တဲ့ Android ဖုန်း Application ကိုဖုန်းမှာသွင်းထားသင့်ပါတယ်။ စပိန် ၊ ပြင်သစ် ၊ အီတလီ
Posted by Linn Ko at 12:31 PM No comments:
Dragon and Shoemaker for Android
Posted by Linn Ko at 4:03 PM No comments:
Death Zone for Android
Posted by Linn Ko at 3:58 PM No comments:
Catch Duck for Android
Posted by Linn Ko at 3:47 PM No comments:
Let's Backup your Games and Apps with APKoptic (Android)
ဖုန်းထဲက Game & App တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူ Backup လုပ်လို့ရမဲ့ App လေးပါ
Posted by Linn Ko at 11:17 AM No comments:
Flipagram:Turn your Instagram photos into fun, captivating video slideshows v2.1 for iOS
iPhone/iPad/ iPod တွေအတွက် ဆော့ဝဲအသစ်လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ Flipagram လို့ခေါ်တဲ့ဆော့ဝဲလေးပါ။ သူက Instagram ဆော့ဝဲရဲ့ တွဲဖက် Application လေးတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် ဖုန်းထဲက ဓာတ်ပုံတွေကို
Posted by Linn Ko at 10:52 AM No comments:
Labels: iOS Application
Rooting Google Nexus7(2013) Tablet Method 2
Credit to သက်နိုင်စိုး(MMAS)
2013 ခုနှစ်ထုတ် အသစ်ထွက် Google Nexus7 Tablet ကို Root လုပ်နည်းကို ရေးသားပေးလိုက်ပါတယ်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်အောင်မြင်ထားပြီးဖြစ်တာကြောင့် Step by Step သေချာစွာလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Nexus72013 Tablet များကိုလည်းအောင်မြင်စွာ Root လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ…
Posted by Linn Ko at 10:30 AM No comments:
Mecho Wars for Android
Posted by Linn Ko at 2:32 PM No comments:
Maxthon Web Browser v4.1.2.3000 for PC (Portable)
အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာ အင်တာနက်သွားသုံးတဲ့အခါ ဆိုင်က Firefox တို့ ၊ Internet Explorer တို့စတဲ့ Web Browser တွေနဲ့မသုံးဘဲ ကိုယ်ပိုင် Web Browser ဆော့ဝဲနဲ့သီးသန့်သုံးချင်သူတွေအတွက် Maxthon v4.1.2.3000 Portable for Windows XP/7/8 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by Linn Ko at 11:23 AM No comments:
KunFu Taxi Endless_2 for Android
ကဲ……မိုးလေးကလည်းအေးအေးလေးနဲ့အိမ်မှာ အနားယူမယ်ဆိုတဲ့ဘော်ဒါများအတွက်
ဒီဂိမ်းလေးကတော့ Running ဂိမ်းအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး တရုတ်မြို့ ထဲမှာ လန်ချားမောင်းနှင်ပေးရမှာ
ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ……ပြေးရင်းလွှားရင်းနဲ့ဧည့်သည်တွေကိုလည်း လမ်းမှာတင်သွားရမှာနော်….
ပြီးတော့ တစ်ခုခုနဲ့ တိုက်မိခိုက်မိရင် ကိုယ့်မှာပါလာတဲ့ဆေးဗူးတွေနဲ့ ကိုယ့်ကို ကိုပြန်လည်ကုသပြီးတော့
ဂိမ်းဆိုက်ကတော့ 35MB သာသာလေးပါဗျာ….
ဆော့လို့ ရတဲ့ Android Version ကတော့ 2.2 နှင့်အထက်ဆိုကစားလို့ ရပါပြီဗျာ….
Download ( KungFu Taxi ! )
Credit to MMSD
Using ADSL Internet Proxy Adress on the Android Phone/Tablet
Android ဖုန်း/Tablet အသုံးပြုသူတွေမှာ တစ်ချို့တွေက ADSL လိုအင်တာနက်လိုင်းမျိုးကနေ Wifi လွှင့်ပြီး ဖုန်းမှာပြန်သုံးနေကြသူတွေရှိမှာပါ။ ADSL ဆိုရင် တစ်ချို့နယ်တွေမှာ Proxy ခံသုံးရပါတယ်။ ygncache.mpt.net.mm နဲ့ 8080 ဆိုတာ ထည့်သုံးရပါတယ်။ Android ဖုန်း/Tablet တွေမှာ Proxy
Posted by Linn Ko at 10:26 AM No comments:
iOS7 Transforming Pack for Windows7and 8
Windows7နဲ့ Windows 8 အတွက် iOS7Style Transforming Pack လေးပါ... လိုချင်တယ့် သူတွေ
အောက်မှာ ဒေါင်းလို့၇ပါတယ် ခင်ဗျ... လာလည်တယ့် အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့...
iOS7 for Windows7Download Here
Posted by Linn Ko at 5:23 PM No comments:
Maxthon Browser v4.0.4000 for Windows PC
ဒီ Browser ကိုတော့အကုန်လုံးသိကြမယ်လိုထင်ပါတယ် Version အသစ်ထွက်လို့တင်ပေး
လိုက်တာပါ ပြီးတော့ Maxthon Web Browser ကိုအသုံးပြုပြီး Phone တွေနဲ့ Computer တွေကို Connect လုပ်နိုင်အောင်
Posted by Linn Ko at 4:54 PM No comments:
Amazing Windows 8 Start Menu
ဒီဟာကတော့ Windows 8 Start Menu လေးပါ တစ်ခြာ Start Menu လေးကတော့ Windows 8 ပုံစံ
လေးနဲလုပ်တယ် ဒါပေမဲ့ဒီဟာကတော့ Windows 8 Metro Start Menu လေးပုံစံလေးနဲ့လုပ်ထားပါတယ်
အရမ်းကြည့်လိုကောင်ပါတယ် ပြီးတော့ကိုယ် Computer ကိုလဲဒီ Start Menu လေးသုံးခြင်းအားဖြင့် လှပ
Posted by Linn Ko at 4:35 PM No comments:
Rotten Friends Pro for Android
သတိ - ကြောက်တတ်သူများ မကလိရ။
ဓါတ်ပုံများကို ကြောက်စရာကောင်းအောင် ဖန်တီးနိုင်တဲ့ App တွေထဲမှာတော့ အလန်းဆုံးနဲ့ တကယ် ခြောက်ခြားစရာကောင်းတဲ့ App တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ App လေးကို ရှာဖွေနေတာကြာပါပြီ။ Free Version
Posted by Linn Ko at 3:20 PM No comments:
Talking Harry: the Hedgehog for Android
Posted by Linn Ko at 3:02 PM No comments:
aTorrent PRO – Torrent App v2.1.0.1 for Android
aTorrent PRO – Torrent App v2.1.0.1
Overview: aTorrent – Bit Torrent Software. Download big files right to your pad or phone!
aTorrent – Bit Torrent Software. Download big files right to your pad or phone!
aTorrent PRO – Native P2P BitTorrent Software for Android devices. Download files with ease right to your phone or tablet!
Professional (Ad-free) version.
Posted by Linn Ko at 2:48 PM No comments:
Golden Call Locator for Android
Name : Golden Call Locator
Version : beta
Size : 7.23
Posted by Linn Ko at 10:42 AM No comments:
Splinter Cell Spider-Bot for Android
Posted by Linn Ko at 10:39 AM No comments:
Killer Escape 2:The Surgery for Android
Posted by Linn Ko at 10:35 AM No comments:
Tower Wars Mountain King for Android
Contra: Evolution v1.1.2 for Android
ဒီဂိမ်းလေးကိုတော့ မှတ်မိကျမှာပါ ငယ်ငယ်လေးတုန်းက ရမ်ဘို အားနိုး စစ်တိုက်ဂိမ်းဆိုပြီး
စွဲလမ်းခဲ့ရတဲ့ ဂိမ်းလေးပါ အခုတော့ Android အတွက်ပါ ရုပ်ထွက်လည်းလန်းတယ်နော်
Posted by Linn Ko at 10:22 AM No comments:
Hotel Dash for Android
Posted by Linn Ko at 4:30 PM No comments:
Let's install app for free without Jailbreak (iOS Device) pp25
မင်္ဂလာပါခဗျာ ကဲ ပန်းသီးသမားတွေအတွက် Jailbreak မလုပ်ထားတဲ့ဖုန်းတွေမှာ Paid App တွေသွင်းဖို့ အတွက် pp25 အက်ပလီကေးရှင်းလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါ
Posted by Linn Ko at 3:40 PM No comments:
▼ Aug (188)
Sony Xperia Style ROM for Huawei C8812 ( Root+CWM ...
Bagan Keyboard Pro V1.6.8 (Free) (Myanmar Keyboard...
Let's Backup your Games and Apps with APKoptic (An...
Flipagram:Turn your Instagram photos into fun, cap...
Using ADSL Internet Proxy Adress on the Android Ph...
Let's install app for free without Jailbreak (iOS ...
Le Vamp v1.0.3 for iPhone/Pad/Pod Touch
Amy in Love for Android
Gapps Installer (4.0.3 to 4.2.2) not need CWM Reco...
Panda Jump Season for Android
Facebook v3.6 for Android
Asphalt 8 Airborne APK+DATA (No Root+Offline) for ...
Asphalt 8: Airborne – v1.0.1 IPA ( iPad,iPhone )
Cracked Screen for Android
Nexus7Unlock Bootloader, Root and OEM Lock Tool
Game description: Throwing Knife2for Android
Crazy Lazy Runner for Android
Game description: Middle Manager of Justice for An...
You Are Surrounded (for Android)
Daredevil Devlin for Android
iPhone Screen Locker v1.08 for Android
Hair Salon v1.0.2 for Android
Sky Islands v1.0.1 (Live Wallpaper) for Androids
[Stock Firmware] Huawei Ascend P6 (Jelly Bean 4.2....
Android application for students...
Maniac Manors v1.0 for Android
Grand Theft Auto Vice City v1.02 for Android
ETERNITY WARRIORS2v4.0.0 Unlimited MONEY
Android IRC v1.7.2
Viber 3.1.1.15 for Android
Let's solve Sudoku with one click
PlayStation All-Stars Island for Android
Ice Age Village v1.1.2 MOD APK+DATA(Unlimited Mone...
Heist The Score APK v1.1.4 ARMv6 for Android
Huawei Firmware Search Engine for Windows XP/7/8
Telekinesis Kyle v1.0.6 (Full Unlocked) for Androi...
Helmut Scanner for Android (Negative Film to Photo...
Wirte Text on the Photo
Drag Racing 1.6.8 for Android
CARROM 3D for Android
Drag Racing: Bike Edition 1.0.53 for Android
Let's See the Flight Schedule from Android (for My...
ANGRY RUN for Android (Let's Run with HERO)
[root] Mobile ODIN Pro for Android
imo free calls and text 3.5.5 for Android
Get Free "iTune" and "Amazon" Gift Card
Army of Darkness Defense (AoDD) for Android
Real Football 2013 (v1.0.7 Oline) & (v1.0.6 Offlin...
Puffin Web Browser v3.0.9864 for Android
Rail Rush v1.3.1 (Unlimited Golds) for Android
MPT Service v1.0.1 for Android
Dialogue for Mac
DGunnres SPa v2.0.9 for Android
Brand Phones Ringtones_v2.2 for Android
This Could Hurt 1.0.6 for Android
Rom Toolbox Pro v5.9.0 for Android
How much gmail account do you want??(Making Gmail ...
Best Park in the Universe v1.1.6 ( Unlimited Stars...
Zapya 1.8(CN) for Android
Bus Simulator 3D for Android